कोरोनाको कहर : यसरी बढाउनुहोस मनोवल ! - Muldhar Post
२०७८, २५ बैशाख शनिबार 254 पटक हेरिएको
गोपाल ढकाल, मनोविद । कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि हामीलाई आक्रान्त बनाउदै लगेकोछ । मानिसहरुमा डर , चिन्ता , भय , तनाव बढेर गएकोछ । विपतिको बेला सामान्य डर , चिन्ता , छट्पटी , तनाव हुनु स्वभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अबस्थामा मानिसले देखाउने स्वभाविक प्रतिक्रिया भनिन्छ । तर लामो समयसम्मको डर ,चिन्ता , भय, तनाव हुनु भने राम्रो होइन । यसले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । तनावले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउछ । कोरोनाको संक्रमणलाइ जित्न रोग – प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबुत हुनु पर्छ ।
कोरोनाको संक्रमणसँग लड्न शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति आबस्यक पर्छ भने मानसिक वा मनोबैज्ञानिक रुपमा मनोवल( आत्मवल वा आत्मशक्ति )उच्च हुनुपर्छ । शरिरिक रुपमा स्बस्थ्य हुन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन संतुलित खानपिन ,ब्यायाम , प्रयाप्त आराम र निन्द्रा जस्ता कुरामा आबस्यक पर्छ ।
जसरी ब्यक्तिको आआफ्नै शारीरिक क्षमता हुन्छ , त्यसैगरी प्रत्येक ब्यक्तिको आ आफ्नै मानसिक क्षमता हुन्छ जसलाई साइकिक इनर्जी वा आत्मबल वा आत्मशक्ति पनि भनिन्छ । कुनै कार्यमा सफलता पाउन , कुनै घटना वा परिस्थितिको सामाना गर्न ब्यक्तिमा भएको मनोवलले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको हुन्छ। आत्मबल उच्च भएको ब्यक्तिमा आत्मबिस्बास पनि उच्च नै हुने गर्दछ ।
यस्ता छन मनोबल बढाउने ब्यबहारिक उपायहरू-
१. सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्छ : कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सुरक्षाका उपायहरू कडाइसाथ अवलम्बन गर्नुपर्छ । भिडभाडमा नजाने, मास्कको प्रयोग गर्ने र बारम्बार साबुन पानीले हात धुने । यसो गर्दा संक्रमित हुनबाट जोगाउने नै भयो । साथै मानसिक रुपमा पनि आफु सुरक्षित छु भन्ने कुरामा मन ढुक्क हुन्छ । आत्मबल उच्च हुन्छ ।
३. परिस्थिति प्रति सकारात्मक धारण : समय सधै एकैनास हुदैन । अहिलेको समय कठिन भए पनि एक दिन अबस्य टरेर जान्छ ।
भागवत गितामा भने झै – ” जे हुन्छ राम्रो कै लागि हुन्छ । ” त्यसैले आत्मविश्वास र धैर्यता कायम राख्नुपर्छ। मनोवल उच्च राख्दा आत्मविश्वास र धौर्यता दुवै बढेर जान्छ । यस्तो बेला आत्तिनु हुन्न भनेर सोच बनाउनु पर्छ ।
४. हौसला तथा प्रेरणा : विपत्तको समयमा हौसला र प्रेरणा अति आबस्यक हुन्छ । घरपरिवार , आफन्त तथा साथीभाइको हौसला, प्रेरणा र आत्मियताले विपत्तिसँग जुझ्न उर्जाको काम गर्छ । विपत्तिको समयमा आफुलाई साथ दिने , आफ्नो भावना बुझ्ने तथा हौसला दिने ब्यक्तिहरुसँग आफ्नो मनका भावनाहरु बाँड्ने गर्नुपर्छ । विपत्तको वेला प्रेरणादायी भनाइ सुन्ने, किताब पढने र चलचित्र वा भिडियो हेर्ने गर्नुपर्छ ।
आफुले आफैलाई आत्मसुझाव दिएर पनि हौसला बढाउन सकिन्छ । जस्तै ” म ठिक छु , स्बस्थ छु , ठिक हुँदै गएकोछु ” जस्ता शब्दहरु बारम्बार उच्चारण गरेर आत्म – सुझाव दिन सकिन्छ । आफ्ना विभिन्न सवल पक्षहरु लेख्ने , मनन वा उजागर गर्नेले पनि आत्मबल बढ्छ ।
५. मनोसामाजिक सहयोग : विपत्तिको बेला विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक तथा मानसिक रोगको जोखिम बढेर जान्छ । लामो समय सम्मको मनोबैज्ञानिक तनाव, मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगले ब्यक्तिको आत्मबल र आत्मबिस्बासलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
यस्तो अबस्थामा भौतिक सहयोग मात्र प्रयाप्त हुदैन । मनोबैज्ञानिक वा मनोसामाजिक सहयोगको पनि जरुरत पर्दछ । यस्तो बेला विज्ञको सहयोग चाहिन्छ । मानसिक रुपमा स्बस्थ ब्यक्तिमा मात्र आत्मबल र आत्मविश्वास राम्रो हुन्छ ।
६. तनावको ब्यबस्थापन : तनावले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा सिथिल वनाउछ । विपत्ति समयमा तनाव बढ्ने नै भयो ।
नियमित रुपमा योग – ध्यान , ब्यायम गर्ने , गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यासहरु गर्ने , शुद्ध सन्तुलित भोजन गर्ने, प्रयाप्त मात्रामा सुत्ने र आराम गर्ने गर्नुपर्छ । जसले तनाव कम गर्न मद्दत पुर्‍याउछ। ध्यानले मनलाई शान्त राख्न सहयोग गर्छ ।
७. आनन्दायक क्रियाकलाप : कोरोनाको कहर र निषेधाज्ञाको समयमा आफ्नो रुचिका बिषय र क्रियाकलाहरुमा धेरै भन्दा धेरै समय बिताउनु पर्छ । जस्तो आफुलाई मन पर्ने किताब पढ्ने , चलचित्र हेर्ने , संगित सुन्ने , लेख्ने , आफ्नो आस्था बिस्वास अनुसार धार्मिक कार्यमा भाग लिने , पूजापाठ गर्ने, चाडपर्व मनाउने, मनोरञ्जन आदि जस्ता बिषयमा सकृय हुनाले एक त समयको सदुपयोग हुने भयो अर्कोतर्फ दैनिकीलाई सहज बनाउन सकियो ।
आफुले दैनिक गर्ने कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने गर्नु पर्छ । नत्र खाली दिमाग सैतानको घर हुन जान्छ । आफ्ना रुचिकर कुरामा समय बिताउँदा तनाव कम हुने , आनन्दसँग दिन बित्ने हुँदा सकारात्मक सोचको बिकास हुनुका साथै आत्मबल समेत बढ्छ।
८. सकारात्मक जीवनशैली : कोरोनाको संक्रमण र निषेधाज्ञाले गर्दा अहिले ब्यक्तिको जिवनशैलीमा समेत पहिलाको भन्दा परिवर्तन आएकोछ । तनावको बेला ब्यक्तिले कि त सकारात्मक व्यवहार देखाउँछ कि नकारात्मक व्यवहार देखाउँछ । सकारात्मक जीवन शैली अपनाएको खण्डमा ब्यक्ति चाडै पुर्ब अबस्थामा फर्कन सक्छ। आत्मबल पहिला जस्तै उच्च हुन्छ । तर नकारात्मक जीवन शैलीले भने समस्या जटिल हुदै जान्छ ।
विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक तथा मानसिक रोगको समस्या देखापर्न सक्छ। हाम्रो दैनिक जीवनशैली र। क्रियाकलापहरु आफू र अरुलाई हानिरहित र सकारात्मक हुनुपर्छ ।
फोन मार्फत निशुल्क मनोपरामर्श सेवाक‍ो व्यबस्था मार्क नेपालले गरेको छ । जसको लागि ९८१३५२७७३२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।( लेखक मनोविद् हुन । मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा संलग्न छन् । )